मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथी गोली प्रहार गर्ने को ? विप्लव की अज्ञात समुह – YesKathmandu.com
काठमाडौं । बोक्सीको आरोपमा राधा चौधरी निर्धात कुटपिट हुँदा घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरी रमिते दर्शक बनेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले सोमवार विहान जनकारवाही गर्ने भन्दै बिज्ञप्ती जारी गरेको थियो । जनकारवाहीको धम्कि आएको १२ घण्टा नवित्दै मेयर चौधरीमाथी गोली प्रहार गरिएको छ ।
उनीमाथी सांघातिक आक्रमण कसले गरयो भन्ने खुल्न सकेको छैन । सोमबार साँझ मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले उनीमाथी गोली प्रहार गरेको छ भने खुकुरीले टाउकोमा प्रहार गरिएको छ । आक्रमण हुँदा मेयर चौधरी आफ्नै निवासमा थिए।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आक्रमणकारीले उनको टाउकोमा गोली प्रहार भएको जनाएका छन्। करिब १० जनाको समूहमा सोमबार साँझ आएका अज्ञात समुहले मेयर चौधरीमाथि सुख्खडस्थित उनको घरभित्रै छिरेर गोली हानेका थिए ।
चौधरीको टाउकोमा खुकुरी हानिएको छ भने गोली खुट्टा र कम्मरमा लागेको छ । आक्रमणबाट घाइते भएका चौधरीलाई अहिले घोडाघोडी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । स्थिति गम्भिर भएपछि उनलाई थपउपचारका लागि सोमबार नै नेपाललगन्ज ल्याइएको छ । उनीमाथी आक्रमण गर्ने को हुन् ? प्रहरीले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
११ सचिवको सरुवा, को कहाँ ?
मतपत्र च्याप्ने कुकर्मको म मतियार बन्न सकिनः आयुक्त नरेन्द्र दाहाल